Buugga Xusuusta Kuwii Xabaal Galay oo la soo bandhigay – Kasmo Newspaper
Buugga Xusuusta Kuwii Xabaal Galay oo la soo bandhigay
Updated - December 1, 2015 12:52 pm GMT
Dabaaldegga 18-guurada Wargeyska Kasmo
30 Nofembar (London); Iyadoo ay ka soo qaybgaleen boqolaal Soomaali ah, galabnimadii Axadda 29kii November 2015, magaalada London waxaa loogu dabaaldegay 18-guuradii ka soo wareegtay dhalashadii Wargeyska Kasmo, oo ku beegneyd 27kii Sebtembar 1997.
Xafladdaas oo si qurxoon loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay aqoonyahanno, halabuurro iyo hoggaamiyayaal faneed oo waayeyn. Waxaa ka mid ahaa Axmed Ismaaciil Xudeydi, Axmed Naaji Sacad, Abwaan Cabdidhuux Yuusuf Xasan, Maryan Mursal, Caasha Karama, saalax Xariiri iyo qaar kale…
Waxaa kaloo soo qaybgalay qorayaal iyo ruug-caddaa saxaafadeed oo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Cabdulqaadir Cali Boolaal, Maxamed Jiilaani Bini Cali, Maxamed Aden Terra, Saciid Jaamac Xuseen, Ayaanlle Xuseen, Dr Turinji, Cabdicasiis Xildhibaan, Dr Anita Suleman, Cabdiraxmaan Abtidoon, Hashin Ducale, Maxamed Cabdullaahi Cartan. Waxaa kaloo ka soo qaybgalay hey’adaha Warbaahinta iyo TVyada Soomaalida ee xarumaha ku leh magaalada London, badankood.
Munaasabadda waxaa kaloo ka soo qaybgalay dhalinyaro, haween, culimo iyo dadweyne kale oo dhammaantood ka tirsanaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee London. Waxaa kaloo ka soo qaybgalay ergooyin ka kala yimid magaalooyinka Manchester, Birmingham, Leicester iyo Leeds.
Xafladda 18-guurada Wargeyska Kasmo waxay ka dhacday Xarunta Resource for London, waxaana si wadajir ah loo maamuusay, looguna dabaaldegay 18-guurada Wargeyska Kasmo oo laga warbixiyey taariikhda uu soo maray, qaab muuqaal iyo erayo intaba lagu soo gudbinayey.
Sannadkan, xuska 18-guurada Wargeyska waxaa lagu maamuusay hawl cajaa’ib leh, taariikhi ah oo Wargeysku qabtay; waa Buugga: Xusuusta Kuwii Xabaal Galay.
Markii la soo bandhigay buuggaas, wuxuu kiciyey dareenka dadkii meesha fadhiyey, waxaana qof kasta oo goobta ka hadlay bogaadiyey, hambalyeeyey, soona dhoweeyey in Wargeyska Kasmo ku fekaro, diyaarsho, kuna guuleysto soo bandhigga Kitaab lagu xusuusanayo hawl-doorkii ummaddii Soomaaliyeed ee geeriyooday 25 sano ee burbur, colaad sokeeye iyo dawlad la’aan lagu jiray.
Buugga “Xusuusta kuwii Xabaal galay” waa kii u horreeyay oo noociisa ah oo loo hibeeyo noloshii, hawlihii iyo hal-abuurkii Soomaaliyeed ee Gabyaa, Hoobal, Hoggaamiye iyo Aqoonyahanba lahaa.
Buuggu waa qaybtii 1aad (Volume One), waxaana qoray C/qaadir Shire Faarax iyo Khaalid Macow Cabdulqaadir oo Tifaftire iyo Tifaftire ku xigeen ka ah Wargeyska Kasmo.
Maxaa loo qoray Buugga Xusuusta Kuwii Xabaal Galay?
1. In lagu joogteeyo xusuusta noloshoodii iyo waxqabadkoodii,
2. In lagu aqoonsado hankii iyo kaalintii bulsho iyo dal ee dadka la xusayo,
3. In la jideeyo dhaqan xusuus-wadareed oo laga gudbo soohdimaha qabiil, gobol iyo koox ee Soomaalida maanta,
4. in la xusuusto dadka noocaan ah waxay da’da maanta joogta iyo kuwa soo socdaba ka caawinaysa helitaan cid ay higsadaan.
Qorayaashu waxay halkaas uga dhawaaqeen in ay meel ka dhac iyo xurmo-darro tahay, been tahay maahmaahda tiraahda; “Qof dhintay kabihiisaa ka roon!”. Waxay sheegeen in dadkii dhintay ay la milgo iyo xurmo yihiin sidii markii ay noolaayeen, ayna tahay in loo dabaaldego noloshoodii iyo waxqabadkoodii iyo hankoodii ummadeed, iyagoo inaga maqan, oo geeriyooday.
Dadkaas, rag iyo haweenba leh ee ku jira buugga Xusuusta Kuwii Xabaal Galay, in kaalintoodii la xuso waa arrin dadnimo iyo aadanenimo, isla markaasna waa la-higsadayaal loo iftiiminayo faca soo koraya. Dhinaca kale, marka aan xusuusanayno waxay ka dhigan tahay in aan anaguna nafteenna karaamaynayno. Waayo, waxaan qirayna hankii, waxqabadkii iyo kaalintii qofkaasi bulshada iyo qaranka Soomaaliyeed u hibeeyey!
Daahfurkii Buugga Xusuusta Xabaal Galay waxaa ku dhawaaqay Axmed Ismaaciil Xudeydi oo ah qofka ugu da’ weyn hal-abuurada iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ee yimid goobti xafladdu ka dhacday, isagana ayaana hadal taariikhi ah meesha ka jeediyey. Xudeydi wuxuu bogaadiyey tillaabada Wargeyska Kasmo qaaday iyo ahamiyadda uu leeyahay Kitaabka Xusuusta Kuwii Xabaal Galay.
Abwaan Cabdidhuux oo hadda ah Maareeyahay Tiyaatarka Qaranka oo booqasho gaaban ku jooga magaalada London, wuxuu qoraalka buuggan ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo guul uu soo hooyey Wargeyska Kasmo. Axmed Shell oo ka mid ah odayaasha Soomaalida UK, kana mid ahaa dadkii xafladda hoggaaminayey, ayaa isaguna erayo qiiro leh ku cabbiray xuska 18-guurada Wargeyska Kamso, iyo gaar ahaan Kitaabka Xusuusta Kuwii Xabaal Galay.
Abwaanka weyn, Ustaad Axmed Naaji Sacad ayaa heeso xusuus ah munaasabadda ka qaaday, isagoo ku xusuusanaya saaxiibadiisay ka mid ahaayeen Cabdillaahi Qarshe, Cabdi Muxumed, Faadumo Qaasim, Dr Raafi iyo qaar kale oo dhmmmaantood ku jira buugga goobta lagu daahfuray ee Xusuusta Kuwii Xabaal Galay.
Xiddigta da’da yar, Caasha Karaama oo ay dhashay Faadumo Qaasim Hilowle ayaa iyaduna heeso qiiro leh meesha ka qaadday, waxaana xafladdu soo dhamamaatay iyadoo dad badani indhohooda ilmo ku taagan tahay!
Qorayaasha Wargeyska Kasmo waxay isla meesha ka sheegeen in kani yahay Qaybtii 1aad, ayna ku maqan yihiin Xusuusta Kuwii Xabaal Galay (Volume II).